आफ्नै बिहेमा ९ महिनाकी छोरी च्यापेर गएकी दुलहीले यसरी खुलेआम…. - inaruwaonline.com
आफ्नै बिहेमा ९ महिनाकी छोरी च्यापेर गएकी दुलहीले यसरी खुलेआम….
प्रकाशित मिति: आइतबार, आषाढ १९, २०७३ समय: १०:५५:४४
एजेन्सी । नेपाल, भारत लगायतका देशमा बिहे अघि बच्चा जन्माएको थाहा भयो भने मात्रै पनि मानिसले जिब्रो काढ्छन् । तर बेलायतमा हालै एक महिलाले आफ्नो बिहेमा ९ महिनाकी छोरी च्यापेर मात्रै गइनन् उनले सबै उपस्थित पाहुनाको अगाडी ब्रा काढेर निर्धक्क स्तनपान समेत गराइन् । बेहुली क्रिस्टीना टोरिनोले स्तनपान गराएका तस्विरहरु सामाजिक संजालमा भाइरल बनेका छन् ।
वैबाहिक समारोह चलीरहेका बेला क्रिस्टीना टोरिनोकी ९ महिने छोरी अचानक डाँको छोडेर रुन थालेपछि परिवारका अन्य सदस्यले धेरै बेर उनलाई मनाउने प्रयास गरे । तर प्रयास असफल भयो । केही सिप नलगोपछि विबाह चलीरहेका बेला क्रिस्टीना टोरिनो नै उठ्नुपर्र्यो । र सबैका अगाडी उनले स्तनपान गराइन् ।
सामाजिक संजालमा उनका तस्विरहरु भाइरल बनेपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले भनेकी छिन् उ मेरी छोरी हो, मैले आफ्नो छातीको दुध उसलाई चुसाउनु के को लाज ? जुन कुरालाई क्यानडाको कानुनले पसिन स्विकारेको छ ।मिडिया एनपीबाट